Samsung က | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
~ သင်ကသင်ပေးရိုးရှင်းသော SSD ကို optimization အပြည့်အဝအလားအလာလွှတ်ပေးရန်
မတ်လ 14, 2015 မောင်းသူ 0
ယခုနှစ် OS ကို-STORE ကြီးတွေပြန်အဆုံး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်ကျေးဇူးတင်နိုင်ရန်အတွက်, the companycut prices of Samsung Galaxy Ace S5830i mobile phone（white）.The event starting […]
ယခုနှစ် OS ကို-STORE ကြီးတွေပြန်အဆုံး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်ကျေးဇူးတင်နိုင်ရန်အတွက်, the companycut prices of Samsung Galaxy Grand i9082 mobile phone（black）.The event […]
စူပါအပေးအယူ! အသစ် Samsung က LIF SSD ကိုရောင်းချရန်အပေါ်ဖြစ်ပါသည်
စက်တင်ဘာလ 1, 2014 OS ကိုထုတ်ကုန်များ 0
ဇူလိုင်လ 4, 2014 osstevejobs 0
ဧပြီလ 15, 2014 admin ရဲ့ 0
Women aged 40-49 plumped for Samsung (36 percent), rather than Apple as their one true love. For men, သို့သော်, the tale is quite different. Their preferred provider is Samsung. Which one you prefer? OS ကို-STORE အားဖြင့်.
Nokia က ပရိုဆက်ဆာ HD Graphics ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် 64-နည်းနည်းက Windows နည်းပညာ device ကိုမော်ဒယ် ဥပဒေရေးရာအနက် Software များ HTC က စီပီယူ OS ကို-STORE Samsung က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Intel က စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Technology_Internet မိုဘိုင်းဖုန်း processor ​​ကို စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု
64-နည်းနည်းက Windows မိုဘိုင်းဖုန်း Software များ HD Graphics Nokia က Sony Ericsson က Samsung ရဲ့ Galaxy စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ စမတ်ဖုန်းများ HTC က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Intel က Server ကို OS ကို-STORE Intel က Samsung က ပရိုဆက်ဆာ Technology_Internet ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု device ကိုမော်ဒယ် processor ​​ကို နည်းပညာ စီပီယူ ဥပဒေရေးရာအနက် Qualcomm မှ